तिब्बती संस्कृतिलाई "भान्छा कोठा"का रुपमा प्रचार-प्रसार गरिने - China Radio International
तिब्बती संस्कृतिलाई "भान्छा कोठा"का रुपमा प्रचार-प्रसार गरिने
(GMT+08:00) 2011-09-16 07:35:21
तिब्बतको दोस्रो ठूलो शहर शिगाचेमा पर्यटकहरूका लागि जानुपर्ने तिब्बती रेस्टुराँ अवस्थित छ। साथै एउटा असी लाख चिनियाँ युआन मूल्य रहेको एउटा सानो परिधिको तिब्बती सांस्कृतिक पूरातात्त्विक वस्तुको संग्रहालय पनि छ। त्यस रेस्टुराँ तथा सानो संग्रहालयले तिब्बती जातीय संस्कृतिको गहिरो माया बोकेर तिब्बती जातिको सांस्कृतिक परम्पराको बिंडो थाम्नुका साथै त्यसको प्रचार-प्रसार गर्दैआएको छ।
त्यस रेस्टुराँको नाम "उर्दो भान्छा कोठा"भन्ने रहेको छ। तिब्बती भाषामा त्यसको अर्थ "पशुपालकको परिवारमा रहेको भान्छा कोठा"भन्ने हो। त्यस भान्छा कोठाको पहिलो तला रेस्टुराँ अर्थात् खाने ठाउँ हो भने दोस्रो तला चाहिं सयौँ वर्गमिटर क्षेत्रफलको तिब्बती जातीय सांस्कृतिक पूरातात्त्विक वस्तु राखिएको प्रदर्शन कक्ष हो। चासिवाँत्वै नामका त्यस रेस्टुराँका साहुजीले धेरै वर्षअघि टाशिलुन्पो गुम्बामा दशौं पान्चेन एर्दिनी चोकी ग्याल्सेनको हेरचाह गरेका थिए। पछि उनी गुम्बाबाट निस्केर होटेल तथा रेस्टुराको व्यवस्थापन व्यवसायमा भर्ना भएका छन्। चालू वर्ष उनको उमेर अठतीस वर्ष भइसकेको छ। एक दिन उनलाई अन्तर्वार्ता लिन हाम्रा सम्वाददाता उनको रेस्टुराँ पुगेका छन्। रेस्टुराँ पस्ते बित्तिकै चोमा नामकी एउटी सेविकाले खुशीसाथ हाम्रा सम्वाददातासँग कुराकानी गर्दछिन्:
क: तिमी किन यस्तो खुसी छौ? हरेक दिनको कारोबार कस्तो छ? व्यस्त वा थकाइ छ कि?
ख: हाम्रो कारोबार ज्यादै राम्रो छ र! मलाई थकाई पटक्कै लागेको छैन।
क: मैले के सुनेको छु भने साम्पा खाएपछि शरीरमा निकै ठूलो शक्ति भरिन्छ। त्यो साँच्चिकै हो कि?
ख: एकदमै ठीक हो! किनभने साम्पा हाम्रो तिब्बती जातिको एक किसिमको विशेषतायुक्त खानेकुरा हो। हाम्रो विचारमा साम्पाभन्दा भातमा पोषण कम हुन्छ। त्यसै कारण हामी सधैं साम्पा खान्छौं।
साम्पा तिब्बती जनताले धेरै मन पराउने खाद्यान्न हो। करिब सत्र वा अठार वर्षको उमेरकी उक्त सेविकाले परम्परागत साम्पाको यस्तो उच्च मूल्याङ्कन गरेको कुरा सुन्दा हाम्रा सम्वाददातालाई ज्यादै आश्चर्य लागेको छ। उनको कुरा सुनेपछि पुन:रेस्टुराँको अवलोकन गर्दा तिब्बती जातिको संस्कृतिका विभिन्न तत्वहरू समस्त रेस्टुराँमा भरिपूर्ण देखिन्छन्। भान्छामा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू, तिब्बती शैलीका तस्वीरहरू र तिब्बती भाषा जताततै देख्न र सुन्नपाइन्छ। यी सबै चीजहरूले यहाँ कार्यरत् युवा सेवक-सेविकाहरू तथा रेस्टुराँमा खाना खाने पाहुनाहरूलाई तिब्बती संस्कृतिबारे अझ बढी ज्ञान प्राप्त गराएका छन्। सेवक-सेविकाका अनुसार, उनीहरूका साहूजी एकजना राम्रा मान्छे हुन् र उनी समयसमयमा केही नचिनेका मानिसलाई पनि सहयोग दिने गर्दछन्। साहुजी चासिवाँत्वैको नेतृत्वमा हामी "भान्छा कोठा"को दोस्रो तलामा रहेको तिब्बती जातीय सांस्कृतिक पूरातात्त्विक वस्तु सँरक्षित प्रदर्शन कक्ष पुगेका छौं।
सन् 1986म टाशिलुन्पो गुम्बामा प्रवेश भएको थिएँ। अनि सन् 1993मा म त्यस गुम्बाबाट निस्केको छु। यहाँ सँरक्षित प्रायजसो वस्तुहरू हाम्रो तिब्बतको लोक क्षेत्रमा रहेका केही पूरातात्त्विक वस्तुहरू हुन्। म र मेरी पत्नीले गत नब्बेको दशकदेखि पूरातात्त्विक वस्तुको सङ्कलन गर्न थालेका छौं। धेरै वर्षअघि दशौं पान्चेन एर्दिनी चोकी ग्याल्सेनले मलाई के बताउनुभएको थियो भने तिब्बती संस्कृतिको सँरक्षण गर्नुपर्छ र बिँडो थाम्नुपर्छ।
दशौं पान्चेन एर्दिनी चोकी ग्याल्सेन तिब्बती बौद्ध धर्मका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रिय एकीकरणको सँरक्षण गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान पनि गर्नुभएको थियो। उहाँको सम्पूर्ण महान जीवनको मानिसहरूले एकदमै कदर र प्रशंसा गर्दैआएका छन्। चासिवाँत्वैले धेरैवर्षसम्म दशौं पान्चेनलाई आफ्नो पूरै मानसिक विश्वको रुपमा पनि व्यवहार गर्दैआएका छन्। तर टाशिलुन्पो गुम्बामा प्रवेश भएको चौंथो वर्षमा दशौं पान्चेनको निधन भएको थियो। त्यति बेला चासिवाँत्वैलाई साह्रै दु:ख लागेको छ। उनी यसरी भन्छन्:
दशौं पान्चेनको निधन भएपछि सन् 1993मा म टाशिलुन्पो गुम्बाबाट निस्केको थिएँ। अनि म कुनै लक्ष्य पनि बिना समाजमा धेरै महिनासम्म यताउती हिंडेको थिए। पछि म तिङ्ग र जिल्लामा अवस्थित एउटा होटेलमा रहेको एक सेवक बनेको थिएँ। अनि मैले क्रमश:आफ्नो कार्यको स्थापना गर्न थालेको छु।
बितेका केही वर्षयता श्री चासिवाँत्वैका साथमा रहेर तिब्बती सांस्कृतिक पूरातात्त्विक वस्तुको सङ्कलन गर्ने युवा-युवतीहरूको सङख्या झन् झन् बढ्दैआएको देखिन्छ। उनको प्रदर्शन कक्षमा एउटा विशेष क्षेत्रले हामीलाई आकर्षित गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा टाशिलुन्पो गुम्बा र पाइच्यु गुम्बा लगायतका तिब्बती जातिका प्रसिद्ध गुम्बाहरूको माटे मूर्तिहरू खडा गरिएका छन्। चासिवाँत्वै यसरी जानकारी दिंदै भन्छन्:
मैले यस रेस्टुराँ खोलेपछि केही टुहुरालाई सहायता दिन थालेको छु। उनीहरूमध्येको एजकना केटालाई माटे मूर्ति निकै मनपर्छ। हेर्नूस, यी सबै नै उसले बनाएका साना माटाका मूर्तिहरू हुन्। पोताला दरबार, टाशिलुन्पो गुम्बा, साच्या गुम्बा र पाइच्यु गुम्बा आदि पनि छन्। हाल उनी नाछ्यु जिल्लामा निर्माण भइरहेको एउटा नयाँ गुम्बामा बुद्ध मूर्ति बनाइरहेको छ।